Home Wararka Gud. Maxamed Mursal “Cidda leh masuuliyadda soo qabashada Mukhtar waan la xisaabtameyna”...
Gud. Maxamed Mursal “Cidda leh masuuliyadda soo qabashada Mukhtar waan la xisaabtameyna” (Dhageyso)
Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa wareysi xasaasi ah siiyey idaacadda VOA, kaasi oo ah kiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu aqbalay mooshinka xil ka qaadista madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajao.
Isaga oo ka hadlayey mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya ayuu sheegay in xildhibaanada keenay mooshinka ay yihiin kuwa xal raadinaya, oo aan dooneyn inay wax dumiyaan, islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay baarlamanka wax ku saxaan.
Dhinaca kale, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay wixii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo oo uu sheegay inay yihiin wax uu filayey oo uu ogaa inay dhici doonaan.
Roobow ayaa sheegay inay baarayaan cidda iska leh qaladka xariga Mukhtaar Roobow, islamarkaana marka la ogaado lagula xisaabtami doono.
Mursal ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay ka tanaasulaan khilaafyada keeni kara dhacdooyin la mid ah kuwii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
“Carabtu waxay tiraahdaa xoog mar walba xoog kale ayuu dhalaa, marka waxaan ku baaqayaa in xal wax lagu raadiyo oo aan xoog la adeegsan” ayuu yiri.
Previous articleXildhibaanada BJFS oo soo saaray dacwad ka dhan faragelinta AMISOM iyo Francesco Madeira (Akhriso)
Next articleIsrael ‘advises’ Trump to boost Djibouti US military presence
Taliyaha Ciidanka Itoobiya & Hoggaamiyaha ismaamulka Oromada oo Muqdisho si qarsoodi...
Maxkamada Sare oo bilaabaysa dhegaysiga dacwadii Xisbiga Himila qaran uu ka...